indlela yokwenza i-pellets yengca,ukwenza i-pellets zotshani ngepetrol okanye yeenkukhu
Lo ngumbala wethu omtsha ophucukileyo webhulowu ipellet mill ezinokuqhubekisa ukutya okuziinkozo njengokutya okuziinkozo .sunflower meal, isidlo sengqolowa, isidlo sangokuhlwa ,isidlo seembotyi kunye nokunye,
I umatshini wokwenza ipellet isetyenziselwa ikakhulu ukwenza iizilwanyana ezondla izilwanyana, yenkukhu, idada, igusha, iinkomo, kwaye ilungile nakwimibhede encinci, umatshini wokudambisa wepellet unokucwangcisa ubungakanani bokugqibela kwepellets ukusuka 2 Imicrosmeter ukuze 10 imakrosimitha , umatshini wokwenza i-pellet unokuqhubekeka nokwenza udaka oluthambileyo lweenkuni kwiipelethi,
ukufuma kufuna i 6% ukuba 10%, kwaye izixhobo eziluhlaza zomatshini wokwenza i-pellet kufuneka zibe kwifom yomgubo.
umatshini wokwenza i-pellet ulungele ukusetyenziswa kwasekhaya kunye nokusetyenziswa kancinci kweefama zeenkukhu kunye nokusetyenziswa kweefama zenkukhu eziphakathi,
imveliso yethu yokuvelisa imveliso icwangcisa ukusuka 30 i-kilo gram 2000 i-kilo gramu , ungakhetha ngokulula phakathi kwaba matshini, Kananjalo sikwabonelela ngeendawo zokuphumla nangaliphi na ixesha uqinisekisa ukuba umatshini wakho usebenza kakuhle.
Sizinikezela ngamandla ekunikezeleni ixesha kunye neyona nkonzo intle kwimveliso nganye esiyifumana naphi na emhlabeni. kunjalo, Uphuculo oluqhubekayo kwiinkonzo kunye nomgangatho wethu luxanduva lwethu olukhulu lomsebenzi ngamnye kwinkampani yethu
Utyani isetyenzisiwe njengendawo yokulala yamahashe kangangeenkulungwane. Kutshanje, Itekhnoloji entsha isivumele ukuba siphucule indlela ebebonakala ngathi ugqibelele ngayo, ukuba zenze iipellets ezithambileyo kumququ kwaye uzisebenzise endaweni yokubeka. Kuyaziwa ixesha elithile ukuba i-pellets enotshani yeyona nto ibhedayo yamahashe.
Ukuchama kumchamo kuthambile ipellets enotshani kulungile, kunye ne-ammonia kunye nephunga lokulawula. Le nkunkuma iphantsi nje ngokuba zincinci izinto zokulala ezingaphantsi komhlaba kufuneka zithathwe yonke imihla. Olunye uphononongo lubonisa ukuba le ndlela iyasika umququ Ukusetyenziswa kwesiqingatha. Ngenxa yoko akukho msebenzi mncinci ufunekayo.
Kuhlala kuyinyani ukuba iindleko ze ipellets enotshani kuba ebhedini iphezulu… kulapho ungaqala ukucinga ngeyethu ipellet mill… Ukuba ungumsebenzisi we-pellet yengca ungaqala ukwenza eyakho i-pellets yengca yakho kwaye wenze ngayo ngeendleko zokuvelisa kuphela. Oku kuyakwenza ukuba ufumane ezona zinqwenelelo zamahashe akho ngaphandle kokuya nzulu kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho.
Kwelinye icala ukuba ngaba unengca efumanekayo unokuvelisa i-pellets yengca yokulala yamahashe kwaye uthengise ngokuthe ngqo kubagcini bamahashe ngenzuzo emangalisayo.